Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Izao tontolo izao dia miseho amin'ny fahasambaran'ny fizahan-tany
Ny tambajotran'izao tontolo izao momba ny fizahantany, ny planeta fahasambarana, ny ivon-toerana iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany, ary SunX dia niara-nientana tamin'ny Andron'ny Fahasambarana fizahan-tany nataon'ny Firenena Mikambana - ary naneho izany.
Andro fankalazana ny fizahan-tany nataon'ny Firenena Mikambana tamin'ny sabotsy sy ny Tambajotra fizahan-tany manerantany nasaina Fifaliana amin'ny planeta, ny Ivon-toerana iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahantany ary SunX hiara-miasa amin'ny webinar hanazava sy hanaparitaka ny fahasambarana manerana ny tontolon'ny fizahan-tany. An'arivony eran'izao tontolo izao no nijery nandritra ny adiny 3 ny antony fahasambarana no fahombiazan'ny fizahan-tany.
Mpitondra fizahantany 456 manerantany no nisoratra anarana tamin'ity webinar ity, anisan'izany Dorji Dhradhul · Tale jeneralin'ny filankevitry ny fizahantany Bhutan. Bhutan no firenena nanombohan'ny fahasambaran'ny fizahan-tany.
Beijing mitarika seranam-piaramanidina azo antoka 60 eto amin'izao tontolo izao amin'ny dia lavitra COVID-19